Muuri News Network » XOG: Qorshe halis ku ah Qaxootiga Soomaaliyeed ee Qaarada Yurub oo ka socda VILLA SOMALIA..(Yaa wada?)
XOG: Qorshe halis ku ah Qaxootiga Soomaaliyeed ee Qaarada Yurub oo ka socda VILLA SOMALIA..(Yaa wada?)
Xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa safar dhowr mar madaxweynaha Soomaaliya Xasan sheekh maxamuud uu ka baaqday in uu ku tago dalal ka tirsan qaarada Yurub waxaana la sheegay in safaradaasi uu hotaagan yahay nin lagu magacaabo Cali Maxamed Cumar Balcad oo ah agaasimaha Madaxtooyada Soomaaliya waxaana uu wataa qorshe ah in safiirka Somalia ee dalalka Midowga Yurub laga dhigo isagoona ku howlan arin halis ku ah qaxootiga Soomaaliyeed ee dalkaasi iyo dalal kale kunool.
Waddamamada Midowga Yurub ayaa horay u diiday inay Cali Balcad siiyaan aqoonsi danjirenimo markii dhowr bilood ka hor loo magacaabay xil safiir, iyagoo ku andacoonayaa inuu yahay nin musuqmaasuq badan oo aan dalalka Yurub lagu soo dhoweyn karin.
Hase yeeshee waxaa dhowaan uu Cali Balcad ku guuleystey inuu dalalka Midowga Yurub ka gado fikir ay si weyn u daneynayaan oo ah in qaxootiga Soomaalida ee ku nool waddamada Yurub dib dalka loogu soo celiyo.
Si fikirkaasi u hirgalo ayaa waxaa shardi ah in horjoogeyaasha jaaliyadaha Soomaalida ee ku nool Yurub ay saxiixaan dalabkaasi, kadibna ugu dambeyntii dowladda Soomaaliya ay iyana saxiixdo.
Cali Balcad ayaa bilaabay socdaalo uu ku tegayo waddamada Midowga Yurub si uu uga soo sameysto guddoomiyeyaal jaaliyadeed oo u saxiiixa warqadahaasi, weliba si deg deg ah , si uu u xaqiijiyo riyaadiisa ah inuu safiir ka noqdo Midowga Yurub.
Ilaa iyo haatan waddamo dhowr ah oo Midowga Yurub, ayuu Cali ku guuleystey inuu si hoose ugu magacaabo inay yihiin guddomiyeyaal jaaliyadeed oo suuq madow ah si ay hadhow ugu saxiixaan waraaqaha oggolaanayaa in qaxootiga Soomaalida dib dalkooda loogu soo celiyo.